Dowlada Punt-Land Oo Heshiis La Gashay Federalka | BARTA BARTA CAYAARAHAA BARTA
← Chelsea Ayaa Lagu Furi Doona Barito Horyaalka Dalka Engiriska
Roma: Mushaar Dhimis Lagu Sameynayo Ciyaartoyda Ka ciyaarta Horyaalka Italia →
Dowlada Punt-Land Oo Heshiis La Gashay Federalka
Dawladda Federaalka Ku-meel-gaarka ah ee Soomaaliya (DFKM) iyo Dawlad-goboleedka Puntland ayaa gaaray heshiis dhinacyo badan taabanaya, kadib muddo todobaad ah oo ay wadahadallo ah xasaasi ah ku galeen magaalada Gaalkayo.
Heshiiskan oo ka kooban 15 qodob ayaa waxa lagu xalliyay mawduucyo taabanaya arimo badan sida siyaasadda iyo arrimaha federaalka, ammaanka, dhaqaalaha iyo arimaha bulshada.
Siyaasadda iyo Federaalka
Qodabbada ay dhinacyadu heshiiska ka gaareen ayaa waxa ka mida in la sii adkeeyo midnimada iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliya, iyada oo DFKG ah ee Soomaaliya u aqoonsatay Puntland goob daggan, oo uu ka jiro maamul, islamarkaana hormuud u ah nidaamka federaalka ah ee Soomaaliya.
Sidoo kale waxa ay labada dhinac ku heshiyiin in la dar-dargaliyo dhamaystirka dastuurka federaalka iyada oo la magacabaayo guddigii fulinta iyo arrimaha aftida. Labada dhinac waxa kale oo ay isku raaceen in magaalada Garooowe xarun looga sameeyo guddiga dastuurka iyada oo Puntlandna ay gudigaas siin doonto gacan si ay howshooda u guttaan.
Qodabbada waxa kale oo ka mida in Puntland ay si gaar ah uga qayb-gali karto shirarka khuseeya arimaheeda gaarka ah, iyada oo sidoo kalana dhinacyadu isla qaateen in DFKM ah ay Puntland kala shaqayso raadinta iyo dhamaystirka mashaariicdii horumarineed ee hay’addii FAI ee Talyaaniga u qaabilsanan arimaha horumarinta ay ka wadday goballada Puntland ka hor sannadkii 1991-kii.
Dhinaca ammaanka ayay dhinacyadu isku afgarteen in xarun wayn oo ay leeyihiin ciidamada Badda laga furo Puntland si wax looga qabto arimaha burcad-badeedda. Iyo in ay sidoo kale labada dhinac iska kaashadaan la-dagaalanka burcad-badeedda iyo tahriibka.
Dhinaca arimaha bulshada ayay labada dhinac isla garteen in DFKM ah ee Soomaaliya wixii deeqo-waxbarasho ah oo ay dibadda ka soo hesho ay 25 boqolkiiba u qoondeeyso Puntland, iyada oo lagu qaybin doono deeqdaas qaab imtixaan ah oo ay maamulayso wasaarada waxbarashada Puntland isla markaana ay Wasaaradda Tacliinta Sare ee DFKM ku yeelan doonto kormeer.
Ugu dambayntiina waxa ay labada dhinac ku heshiiyeen in dhammaan hay’adaha caalamiga ah xafiisyadooda u xilsaaran Soomaaliya u soo raraan meelaha nabaddu ka jirto ee Soomaaliya sida Puntland.
Ra’iisul-wasaaraha DFKG ah ee Soomaaliya Cumar Cabdirashid Cali Sharmarke oo VOA-da la hadlay ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay heshiiska, uuna ku kalsoon yahay in uu meel-mar noqoon doono.
Madaxwynaha Dawlad-goboleedka Puntland Cabdiraxaman Sheekh Maxamed Faroole oo isaguna VOA-da la hadlay ayaa sheegay in haddii la fuliyo heshiiskan uu daawayn karo arimo badan oo uu maamulkiisu ka saluugsanaa.
Puntland ayaa xiriir aad u dhow la lahayd hogaankii hore ee Dawladda Federaalka KMG ah ee Soomaaliya, iyada oo tan iyo intii la soo dhisay xukuumadda midnimada qaran ee ra’iisul-wasaare Sharmarke ay jireen khilaafaad u dhexeeyay labada dhinac. Waxana la filayaa in heshiiskani uu soo afjari doono khilaafaadkaas.
Comments Off on Dowlada Punt-Land Oo Heshiis La Gashay Federalka
Posted by Mohamed Tollman on August 23, 2009 in Uncategorized